"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ၁၂။ Blogger မှာ Website လုပ်မယ်
၁၂။ Blogger မှာ Website လုပ်မယ်
သင် Website တစ်ခုမဖန်တည်းခင် သင်၏စိတ်ကိုသေခြာဆန်းစစ်ကြည့်ပါအုန်း သင်ဘယ်လောက် စာဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သင့်ကိုသင်ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်စေလိုပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Blogger ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါစာများများဖတ်ပေးရန်အထူး အရေးကြီးလှပါသည် စိတ်ရှည်ပြီး ဇွဲကောင်းဘို့လဲ လိုပါသေးသည်။ Website တစ်ခုစတင်ဖန်တည်းတော့မယ်ဆိုရင် သင့် Website သည်သင့်ရင်သွေးနှင့်မခြားပြုစုပျိုးထောင်းပေး စောင့်ရှောက်ပေးရမှာ သင့်တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင်ဘယ်လောက်သက်တန်းကြာကြာ
ပြန်လည်မိုးမန်ပြင်ဆင်ပေးနေနိုင်အုန်းမယ် ဆိုတာကိုပါထဲ့တွက်သင့်ပါသည်၊ ကျနော်ဒီဆိုက်ကို
တည်ထောင်ရာတွင် ဒီ Blog ရေးနည်းကိုပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တည်းလိုချင်းသည်
အထူး ဂရုစိုက်ရမှာ ကတော့ မိမိ Website သည် Free Link များ Free URLs
များကိုမှိခိုအားထားလုပ်ဆောင်ရသဖြင့် မိမိ Website ထဲမှ Hacker များ Virus များကို ဝင်ရောက်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးထားသည်ဆိုသော အချက်ကို ထဲ့သွင်း စဉ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သိုသော်လည်း ကျနော်တို့တွေက Hacker များ Virus တွေကိုကြောက်နေရင် လဲ
ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒိအတွက်မိမိဆိုဒ်မှ ဒေါင်းလုပ်ယူမည့် Software များကို
မိမိကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်သုံးစွဲသင့်လှပါသည်၊ ကျနော်တို့ Link ချိပ်ထားသော ဆိုးဒ်များ၏
Update လုပ်ခြင်း Upgrade လုပ်ခြင်းများ ကြောင့်လဲအပြောင်းလဲများစွာရှိ
သဖြင့်မိမိတို့၏ဆိုဒ်များကိ်ု အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသင့် ပါသည်။ သင့်အနေဖြစ် Google Drive ကိုအသုံးပြုတပ်ရန်လဲ လိုအပ်ပါသေးသည်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
Software များကိုမသုံးစွဲသေးမှိ Google Drive သို့တင်ထားခြင်းသည်
ဆိုဒ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွား သောအခါသင့်လက်ထဲတွင် မူရင်းလက်ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး Download လုပ်ယူရာတွင့်လဲ Virus ရှိမရှိကို Google မှအသိပေးချက်ကိုသင်တွေ့မြင်
ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Google Drive မှဒေါင်း ယူရာတွင့်သင်၏ Google
Drive Files များကို Publish ကြေငြာပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်၊
ဤဆိုဒ်ကိုကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင်ဖန်တည်းရာတွင့် Blogေ၇းနည်းကို
အဓီကထား ရေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော် ဆိုဒ်သည် ရေးလက်စ ဖြစ်ကြောင်း
ကိုအထူးအသိပေးလိုပါသည်။ Blogger ကောင်း များပေါ်ထွန်းရေး ကိုအထူး
ဦးတည်ရေးသားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ် ဤ Blogger ၏မူရင်းဆိုဒ် Upgrade လုပ်သွားပါက ကျနော့နည်းများလည်း ထပ်မံပြုပြင်အသစ်ရေးသွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Blogger တစ်ယောက်အနေဖြင့် မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ HTML ဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့သင့်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ Hacker ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်
မဖြစ်မနေ သိထားရမဲ Computer Language တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်၊ အလျှင်းသင့်သလို
ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ ကျနော်လဲ သင်ယူနေဆဲပါ။
ဒီမှာ Sing Up လုပ်မယ်
ဒီပုံလေးတွေက Template လေးတွေပါ Website Design တွေဖြစ်ပါတယ်။
အထက်က ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံလေး တွေဘေးမှာ Gmail လိပ်စာနဲ့ Gmail Password ကိုဖြည်းပေးပါ Member ဝင်တာဖြစ်ပါတယ် အဲလိုဖြည့်ဘို့ အောက်မှာ ကလစ်နှိတ်ပေးပါ။
Gmail Account နဲ့ Password ဖြည့်ရန်
သရုပ်ပြ Video ကိုကြည့်ပါ သင်လုပ်ရတာ လွယ်အောင် ကျနော်ကြိုးစားထား သည်။
ဒီမှာကလစ်နှိတ်မဲ့သူများက Gmail, Google Groups, အကောင့် နဲ့ Orkut,အကောင့် ရှိပြိးသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်၊ တကယ်လို့သင့်မှာအကောင့်အဆင်သင့်မရှိသေးပါက ဤနေရာမှ Gmail အကောင့်သင့်ကိုဖွင့်ယူပါ။ Create one now.
ဤအဆင့်ကို Gmail ကောင့်ဖွင့်နည်းမှာ ရှင်းပြပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
သင်အကောင့်သစ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ဖြစ်စေ အကောင့်ရှိပြီးသားမို့ Blogger ရဲ့မူရင်း Page ကိုကြည့်ချင်ဖတ်ချင်ပါက ဤနေရာမှာ Click နှိတ်ပြိးကြည့်ပါ အောင့်မှာတွေ့ရမဲ့ Contents ရဲ့ ခေါင်းစဉ်များလိုက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ အာင်းလုံးခေါင်းစဉ် ၈ ခုရှိပါတယ်။
1.Createablog ကနေပြီးတော့ Blog စတင်ဖန်ဖည်းပုံကိုရာ မိမိရဲ့ Email နဲ့ Password ကိုဖြည့်ပြီး Sign In မှာ ကလစ်နှိတ်ပြီးစဝင်ပါ။ စာမျက်နှာ အသစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် အဲဒီစာမျက်နှာမှာ အကောင့်ဖွင့်ပြိးသွားရင် နောက် ပေါ်လာမဲ့ စာမျက်နှာမှာ Continue To Blogger မှာ ကလစ်နှိတ်ပြိးရင် Blogger တစ်ခု သင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပေါ်လာမဲ့စာမျက်နှာက အောက်ကပုံလို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်အထက်နားက လူကိုတစ်ပိုင်းပုံအောင်နားမှာ မျှားအနီနဲ့ ပြထားတဲ့နေရာမှာ New Blog လို့ရေးထားတာကိုကလစ်နှိတ်ပါ စာမျက်နှာပြောင်းသွားပါလိပ်မယ်။
စာမျက်နှာအသစ်က အောက်ပါပုံလို ပေါ်လာပါမယ်။
> အောက်ကနမူနာပုံလေးကို ကိုကြည့်ပါ Title မှာ နှစ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်ရွှေးမယ် ဒိခေါင်းစဉ်က သင့် Web Page ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လို့ သေချာရွေးပါ။
> Address မှာ ဝက်ဆိုက်လိပ်စာရွှေးမယ်၊ သင့် Website ကိုလာလည်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်၊
You can addacustom domain later.
You can browse many more templates and Cumstomise your blog later.
အထက်က ဘောင်ထဲမှာ Template တွေပေးထားပါတယ်။
> Template မှာ ဝက်ဆိုက်ရဲ့ ဒဇိုင်းရွှေးမယ် ဒါက သင့် Website ကိုအလှဖန်တည်းတာပါ သင်နှစ်သက်ရာကို အလှဆုံး ရှာရွှေးနိုင်ပါတယ်၊
> ရွှေးပြိးသွားရင် Create Blog မှာ ကလစ်နှိတ်ပေးပါ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ အလုပ်အတော်စုံနေ ပါပြိ။
2. Dashboard ကနေပြီး သင်ဖန်တည်းလိုတာအားလုံးကိုအမြဲ စတင်လုပ်ဆောင် ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အောက်ပါပုံက Dashboard ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပြုလုပ်ဖန်တည်း ထားတဲ့ စရင်းအားလုံးကလဲဒီမှာ ရှိနေပါတယ်။ အောက်ပါစာမျက်နှာကဲ့သို့ မြင်၇မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာသိထားရမှာလေး သုံးခုထဲကိုပြောပြပေးပါမယ်။
> လေးထောင့်အနီရောင်ဘောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်က ခဲတံအဝါရောင်လေးနဲ့ပုံက Writinganew Post ဘဲဖြစ်ပါတယ် Post အသစ်ရေးတိုင်း တင်တိုင်း နဲ့ ပြန်ပြုပြင်တဲ့အခါတိုင်း အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
> လေးထောင့်ဘောင်နဲ့ အနီရောင်မျှားပြထားတဲ့နေရာက Go to post List ဖြစ်ပါတယ်။ Post တွေကိုပြင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ Drop down မျှားလေးကို နှိတ်ကြည့်ရင် အောက်ပါခေါင်းစဉ် များကိ်ု တွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
> View blog ကို အသုံးပြုတာ ကတော့ သင်လုပ်ထားတဲ့ Website ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်
> Go to post List မှာက သင်တင်ထားတဲ့ Post တွေကိုပြင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်၊
> Overview မှာက သင့်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုကို ကြည့်လို့ရပါတယ်၊
> Post မှာက သင်ရေးချင်တာတွေရေးဘို့ပါ၊
> Pages မှာက သင်စာမျက်နှာ အသစ်တွေ ထပ်ယူနိုင်ပါတယ်၊
> Comments မှာက သင်ဆိကို ဝင်ကြည့်သူတွေ ရေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
> Google+ မှာက သင့် Website ကိုသူငယ်ချင်းတွေဆိကို Share လုပ်နိုင်ပါတယ်၊
> Stats သင်ကိုတိုင်ဝင်ရောက်လေ့လာ ကြည့်ပါ၊
> Earnings သင်ကိုတိုင်ဝင်ရောက်လေ့လာ ကြည့်ပါ၊
> Layout မှာက သင့် Page ရဲ့အဆင် အပြင်ကို ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်။
> Templates မှာ သင် Website Design ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
> Setting ကနေပြိးတော့ အားလုံးကို လုပ်ဘို့ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3.Overview အောက်က ပုံကတော့ Overview ကိုကြည့်ရင်မြင်ရမဲ့စာမျက်နှာပါ သင်လုပ်ဆောင်ထားသမျှတွေနဲ လတ်တလော ပြုလုပ်ထားဆဲ့မှတ်စုတွေ ကိုဇယားချပြီး ဖေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
4. Write your post ကနေ သင်ရေးလိုသမျှကို စတင်ရေးရမျာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က သရုပ်ပြ Video လေးကိ်ုလေ့လာပါ၊
Creating Tabs for Blogger
Post တွေစရေးဘို့ Dashboard ထဲက ခဲတံပုံလေးကိုကလစ်နှိတ်ပါ၊ စာမျက်နှာပြောင်းသွားမယ် စာမျက်နှာအသစ်ကတော့ Post Editor Page ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ Post ခေါင်းစဉ်ပေးပါ ပြီးမှ စာကိုယ်ကို အောက်မှာရေးပါ။
ပြိးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Preview button ကနေသင်ဖန်တည်းထားသမျှကိုပြန်ကြည်နိုင် ပါတယ်။ ပြိးနောက် Publish button ကိုကလစ်နှိတ်ပါ။
5.Add an image ပုံထည့်တာကို ရှင်းပြမယ် ပုံတွေကိုမိမိ ကွန်ပြူတာက ဖြစ်ဖြစ် Websites တွေထဲကဖြစ်ဖြစ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ Post Editor Page Tools Bar ထဲက Icon တွေကိုသိထားဘို့အရေးကြီးပါတယ် အထက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံက Post Editor Page ပုံဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ မှင်နီလေးထောင်ဘောင်ထဲမှာ Icons တွေကိုမြင်သာအောင် မျှားအနီနဲ့ပြထားပေးပါတယ် အားလုံးသုံးတတ်အောင်လေ့လာပြိး သုံးပါ။ ပုံလေးတွေအပေါ် ပွိုင့်တာလေးထောက်ကြည့်ပါ English လိုရေးပေးထားပါတယ်။ Insert Image Icon ကနေသင့် ကွန်ပြူတာထဲက ပုံကိုထဲနိုင်သလို Website တွေရဲ့ URL ကနေပြီးတော့လည်း ပုံတွေကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ထဲ့ လို့ရပါတယ်။
သင်ထည့်လိုတဲ့ပုံကို သရုပ်ပြ Video ကနေလည်းကြည့်ပြီးလေ့လာပါ၊ ပုံကို Insert Image မှာကလစ်နှိတ်ပါ ပေါ်လာမဲ့ Page ထဲက Choose File မှာကလစ်နှိတ်ပါ မိမိသိမ်းထားတဲ့ File ကနေ ခေါ်ယူပါ။ ပေါ်လာတဲ့ ပုံကို ရွေ့းပြီး အောက်က Add Selected ကိုကလစ်နှိတ်ပေးပါ ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုလဲ 'Left', 'Center', and 'Right' စသဖြင့်သင် ထားလို ရာမှာရွေးပြိးထား နိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်ဆောင်စရာ တစ်ခုပြီးသွားတိုင်း လိမ္မောာ်ရောင်ဘောင်ထဲမှာ Update လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာ ကလစ်နှိတ်ပေးပါ အဲဒါကို အမြဲသတိထားပါ။
6.Addavideo ကနေသင့်ရဲ Video File ကိုသင့် Website ထဲသို့တင်ရန်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Insert Video ကနေ ခေါ်တင်ရမျာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ ပုံတွေတင်တုန်းကပြောခဲ့သလိုပါဘဲ။ Insert Video မှာကလစ်နှိတ်ပါ ChooseaVideo to Upload မှာကလစ်န်ှပြီး မိမိသိမ်းထားတဲ့နေရာကလေ ခေါ်ယူပါ။ ပြီးလျှင် Upload မှာကလစ်နှိတ်ပြီးတင်ထားပါ Loading Time ကိုစောင့်ပါ Speed နှေးနေပါက အလွန်ကြာအောင်စောင့်ရပါမယ် စိတ်ရှည်ပါ၊ Post Editor ကအလုပ် လုပ်နေတာကို သင်မြင်ရပါမယ်။ AVI, MPEG, QuickTime, Real နှင့် Windows Media Files များကိုသာ တင်လို့ရပါ ကိုတင်မဲ့ Files များကို မတင်ခင်သေချာ စစ်ဆေးပါ၊ File Size ကလဲ 100MB ထက်မကြီးမှသာ တင်လို့ရပါတယ်၊ ပြီးသွားပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ Post Editor မှာမြင်ရပါမယ် ။ လိမ္မောာ်ရောင်ဘောင်ထဲမှာ Update လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာ ကလစ်နှိတ်ဘို့မမေ့နဲ့နော်။
7.Customize Template ဆိုတာ သင့်ရဲ့ Blog ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ဘိုပျော်စရာ နည်းလေးပေါ့၊ Blog ကိုစတင်ဖန်တည်းစဉ်ထဲကရွေးချယ်ရတဲ့ ပုံသေသုံးမဲ့အခြေခံ Design လေးပေါ့ သင်နှစ်သက်ရာကို ရွေးပြိးအသုံးပြိုနိုင်ပါတယ်။ သင်နှစ်သက်ရာ Template မှာကလစ်နှိတ်ပြီး လွယ်လင့် တကူရွေးနိုင်ပါတယ်။့ 
Template ကိုအနီရောင်ဘောင်ခတ်ပြီး မျှားပြထားပေးပါတယ် အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ၊ သင့်အနေနဲ့ HTML ကိုအသုံးပြုတာကို ပိုင်နိုင်ရင်လဲ Post Editor ဘားတန်းထဲက Edit HTML မှာကလစ်နှိတ်ပြိး သုံးပါ။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ပြီးသား Template ကို Layout ကနေ Edit လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဘေးကပုံမှာ ပြထားတဲ့နေရာ ကနေကလစ်နျိတ်ပြိး သုံးလို့ရသလို အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံကနေ နံပါတ် 1 မှာရှိတဲ့အနီရောင်ဘောင်ကို မျှားပြထားတဲ့နေ၇ာက Drop-Down မျှားလေးမှာ ကလစ်နှိတ်ပြီး အောက်ကိုဆင်းသွားပြီ နံပါတ်2မှာပြထားတဲ့ Layout ကနေလဲ ကလစ်နှိတ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
Layout မှာကလစ်နှိတ်ပြိးရင် စာမျက်နှာပြောင်းသွားပါမယ် အသစ်ပေါ်လာတဲ့ စာမျက်နှာမှာ Edit ရယ် AddaGadget ရယ်ကိုတွေရပါမယ်၊ Edit မှာက ရှိပြီးသား Gadget ကိုပြန်ပြင်ဘို့နဲ့ AddaGadget မှာ အသစ်တင်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်အနေနဲ့ အသစ်တင်လိုပါက AddaGadget ကိုကလစ်နှိတ်ပါ၊ Pop-Up မီနူးလေးပေါ်လာမယ်၊ ပေါ်လာမဲ့ ပုံကအောင်ကပုံလိုမျိုးပါ။
သင်က ဘာကိုထဲလိုပါသလဲ မိမိ နှစ်သက်သလိုအသုံးချကြည့်ပါသင့် Blog မှာအလှပလေးတွေကို ဖန်တည်းကြည့်ပေါ့။ သင်းစိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်လို့ပြေီးသွားရင် Save မှာကလစ်နှတ်ပါ ပြီးလျှင် Save arrangement မှာကလစ်ထပ်နှိတ်ပါ ။ သင်ဖန်တည်းပြိးသမျှကို View Blog ကနေကြည့်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Update လို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာ ကလစ်နှိတ်ပြီးတိုင်း Save arrangement မှာလဲ ကလစ်နှိတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
8. Privacy and permissions Blog ကိုမူသေယူပြီးသွားလို့ Publish ဖြစ်ကြေငြာပြိးသွားရင်တော့ အင်းတာနက်ကလေ လူတိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါပြီ။ သင် Publish ကြေငြာရန်လုပ်လိုပါက Settings မှာကလစ်နှိတ်ပြီး Basic tab. ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဘေးကပုံမှာ Setting ကိုရှာလို့လွယ်အောင် ပြထားပေးပါတယ်။ Setting ထဲကနေ Basic Tab ကိုရှာပြီး ကလစ်နှိတ်ပြီး ဝင်ပါ၊ စာမျက် အသစ်ပြောင်းသွားပြီး အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ ပုံမျိုးပေါ်လာမယ် အဲဒိကနေပြီး Blog Readers မှာကလစ်နှိတ်ပြီး Anybody မှာ ကလစ်နှိတ်ပေးပါ။ အောက်မှာပြထားပေးတဲ့ ပုံမှာက Only Blog Authors ဖြစ်နေပါတယ်၊ Edit မှာကလစ်နှိတ်ပြီး Anybody မှာကလစ်နှိတ်ပြီး Save Change မှာ ထပ်နှိတ်ပေးပါ၊ ဒါဆိုရင် သင်အတွက် သင့်ရဲ့ဝက်ဆိုက်ကို လူတိုင်းဝင်ရောက်ကြည့်လို့ ရသွားပါပြီ။
ဆက်လက်ပြိးဖေါ်ပြပေးသွားမှာကတော့ Blogger's post editor ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီ Post Editor ထဲမှာ နည်း၃ခုပါဝင်ပါတယ်၊ Compose, Edit HTML နဲ့ Preview တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ Compose မှာ Text နဲ့ Button တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်အောင် သင့်ကို ပြုလုပ်ပေးပါမယ်။ Edit HTML က သင်ရေးထားသမျှတွေကို အကြမ်းဖျင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ Preview ကတော့ လုပ်ဆောင်ထားတာတွေကို စိတ်ကြ်ိုက် ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ပြိး ပြင်းစရာ ရှိရင်ပြန်ပြင်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီမှာသင်ဖန်တည်းထားထားတဲ့ ပုံတွေ ချိတ်ထားတဲ့လင့်တွေ ခေါင်းစဉ်တွေ အားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်စတင်လုပ်ဆောင်တော့မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး အရေးကြီးတာပ ခေါင်းစဉ်ပါ အထက်ကပုံမှာ အနီေ၇ာင်ဘောင်ထဲကို မျှားပြထားတဲ့နေရာက Post Title နေရာမှာ သင်ရွေးလိုရာ ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပေးပါ။
Compose နဲ့ HTML ကိုပြောပြပြိးပါပြီ သူတိုနှစ်ခုဘေးက မှားလေး နှစ်ခုကနေဆက်ရှင်း
ပြသွားပါမယ် ပထမ မျှားလေး က Undo ပါ အဲဒါတွေကိုအောက်မှာ အစဉ်လိုက်ရေးပြိး ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။
Undo လုပ်ပြိးသား ကို ကလစ်နှိတ်ပြီး ပြန်ဖျက်တာပါ၊
Redo က အဖျက်လွန်သွားတာ မျိုးကို ပြန်ခေါ်ယူတာ ပါ၊
Font သင်ရေးလိုတဲ့စာလုံး အမျိုးအစား ရွေးတာပါ၊
Font size စာလုံး အရွယ်ဆစား ချိန်တာပါ၊
Headings ရေးတဲ့စာ ကို ဘယ်လိုမျိုး သုံးမှာလဲ ရွေးတာပါ၊
Bold ရေးမဲ့စာကို ထင်းအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်၊
Italic စာလုံးကို အစောင်း လိုက်ရေးတာ ပါ၊
Strikethrough ရေးထားတဲ့စာ ကို အောက်ကနေ လိုင်းတားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊
Font color စာလုံးအရောင် ရွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်၊
Background color စာလုံးရဲ့ နောက်ခံ အေ၇ာင်ရွေးတာပါ၊
Link သင်ချိတ်လိုသော Website များနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်၊
Image ပုံတွေ ထဲသွင်းမဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်၊
Video သင်တင်လိုသော Video Files များကို ဒိနေရာမှ ကလစ်နှိတ်ပြီး တင်ရမှာပါ၊
Jumpbreak သင့်ရဲ့ Post ကို Read More ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်အတိုချုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်၊
Justify text စာလုံးတွေရဲ့ အထားအသိုကို ဒီကနေပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊
Ordered (numbered) list စာကြောင်းတွေကို နံပါတ်တပ်တာပါ၊
Unordered (bullet) list စာကြောင်းတွေကို အစက်တွေတပ်တာပါ၊
Spell check ရေးထားတဲ့ English စာကိုပြန်စစ်တာဖြစ်ပါတယ်၊
Remove formatting from selection စာတွေကိုပြန်ဖျက်တာပါ၊
ဆက်လက်ပြိးဖေါ်ပြပေးသွားမှာကတော့ Blogger Template Designer ဖြစ်ပါတယ်၊
Blogger Template Designer ကနေသင့် Website Design ကနေ သင်ဖေါ်ပြလိုတဲ့ တာအားလုံး အရောင်၊ ပုံ၊ ကော်လာ စဖြဖြင့်အားလုံးကိုသင်စိတ်ကြိ်ုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ် ဒီအတွက် Template Designer ကိုခေါ်ယူဘို့ရန် Drop-Down မျှားလေးကို ကလစ်ှိတ်ပြီး Template ကိုရွေးပါ၊ နောက်တနည်းလဲ သွားလို့ရပါသေးတယ် အဲဒါကတော့ အောက်မှာဖေါ်ပြပေးထား တဲ့ပုံ အတိုင်းသွားပါ၊
Template ကိုအနီေ၇ာင်နဲ့ပြထား ပေးပါတယ် ပေါ်လာမဲ့ စာမျက်နှာအသစ်က Customize ကိုကလစ် နှိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ စာရွက်အသစ်မှာအာက်မှာ ပြထားသလို မြင်းရမျာဖြစ်ပါတယါ။
ဒီနေရကနေ သင်ချင်တာ ကိုထင်တိုင်းကြဲပြီးရင် Preview ကြည့်လို့ရပါတယ် မကျေနပ်သေးရင် ထပ်ပြင်ပါ၊ စိတ်ကျေနပ်သွား ပြီဆိုမှာ Apply to Blog ကနေအတည်ပြုပေးလိုက်ပါ၊ ဘယ်လို Template ကိုဘဲသင့်အနေနဲ့ Preview ကနေကြည့်ကြည့် သင်ကြည့်သမျှတွေကို Live on Blog မှာမြင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အောက်မှာမြင်နေတဲ့ပုံက Live on Blog နမူနာပုံဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အထက်မှာ
မြင်းနေရတဲ့ ပုံကတော့ Template Designer ရဲ့ Control Panel ဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်က Reset မှာ ကလစ်နှိတ်ထားမယ်ဆိုရင် သင်မပြောင်းရသေးတဲ့ လက်ရှိမူရင်း စာမျက်နှာကိုလည်းမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Background ကိုအသုံးပြုပုံကို ဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်၊ ဒီ Template Designer ကိုသုံးပြုရင်း Background အေ၇ာင်တွေ ပုံတွေနဲ့ Color scheme တွေကိုပြောင်းလဲ လို့ရပါသေးတယ်၊ ဒါကိုစလုပ်ရန် Background Image အောက်က Thumbnail မှာကလစ်နှိတ်ပါ၊ နောက်ခံပုံရဲ့ အေ၇ာင်တွေကိုလဲပြောင် နိုင်ပါတယ်၊ ဒီပုံဟာ နောက်ခံကိုဖေါက်မြင်းနိုင်တာ မျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ သင့်နောက်ခံပုံရဲ့အေ၇ာင်ကို Main Color Theme ကနေပုံကို Selected လုပ်ပြီးပြောင်းနိုင်ပါသေးတယ်၊
ဘယ်ဘက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးကတော့ သင်အသုံးပြုရာမှာ လွယ်လင့် တစ်ကူရှိအောင်ပြသ ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် Up Arrow လေးကိုရွှေ့ပြီးပြောကြည့်ပါ၊
Layout ကနေပြီးတော့ အမျိုးမျိုးသော ပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်ပါသေးတယ်၊
ကော်လာ တစ်ခု မကကိုလဲ အသုံးပြိုနိုင်ပါတယ်၊ အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေ
ကိုကြည့်ပြီး သင်နှစ်သက်တ သလိုပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်၊
အကယ်၍သင် Gadgets ကိုထဲ့လိုသည်ဖြစ်စေ ပြန်ထုပ်ပြစ်လိုသည်ဖြစ်စေ layout ကနေလုပ်ဆောင်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။
Adjust Width သင့် Layout ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ပြိးသွားရင်သင့် Website ရဲ့ဗျက်ကို အကျင်း အကျယ်လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်၊ ခုကျနော်သုံးနေတာ ကော်လာ ၃ ခုပါတယ်၊ ဒါကြောင့် Width ကိုချိန် ညှိဘို့ ၃ ခုပေးထားတယ် ထင်ပါတယ် အောက်မှပြပေးထားတာ Website ရဲ့ဗျက်ကိုချိန်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်၊ မျှားလေးတွေကိုဘယ် ညာရွှ့ပေးခြင်းဖြစ် ပြုပြင်ကြည့်ပါ၊
Blogger Template Designer နဲ့ပါတ်သက်လို့ရှင်းပြစရာ ပြီးပါပြီ သို့သော်လဲ သူ့မူရင်းမှာကို ရှင်းမပြထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်းလေး ရှိပါတယ် အဲဒါကတော့ Advance ဘဲဖြစ်ပါနယ်၊ သင်ရဲရဲတင်းတင်းဝင်ရောက်ပြုလုပ်ကြည့်ပါ ဒိနေရာမျာ ပြင်လို့ရတာကတော စာလိုးနဲ့ပါတ်သက်တာများ ပါတယ်။
How to Start in blogger
Blogger မှာ CreateaDrop Down Menu ဖန်တည်းခြင်ရင် ဒီ YouTube Link ကိုသွားပါ
Fix blogger labels or categories -2 methods
How to add an HTML code to your Blog
Youtube.com မှမူရင်းကိုကြည့်လိုပါက ဒီနေရာကသွားပါ။